Very bad — Steemkr
gold-bloger36 in artzone
အဆိုးမြင်စိတ်တွေဆီသို့တစ်ဗီဇနဲ့တူ, ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျက်နှာသို့တဦးတည်း - Rosling တစ်ဆယ်ကမ္ဘာကြီးကိုပေါ်မှာငါတို့ရှုထောင့်ဖျက်သည်ဟုဗီဇအတိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
'' ထိုးထွင်းသိမြင်ရာမှအကြိုးပွုနိုငျထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်လူတွေထင်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာတိုးတက်စေလျှင်, အဘယ်ကြောင့်လူတွေအကြောင်း
လူသန်းပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာဆွီဒင်ဆရာဝန်နှင့်စာရငျးအငျးပညာပညာရှင် Hans Rosling ရဲ့ TED ကိုဆွေးနွေးပွဲအဘို့များတွင်ဖမ်းယူနားဆင်ကြနှင့်ဗီဒီယိုများအနည်းဆုံးနာမည်ကြီးပန်ကာဒအာရုံကိုဖမ်းမိ: Bill Gates က။ ဘီလ်ဂိတ်နှင့်သူ၏ဇနီး Melinda ဒေတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်နဲ့သူ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုရရှိခဲ့သူအ Rosling, မိတ်ဖွဲ့ဖို့သွားလေ၏။
နှင့်အရာကိုသင်စဉ်းစားပါထကျ သာ. ကောငျး Are အဘယ်ကြောင့်, သူ့သား, Ola Rosling နှင့်သမီး-In-ဥပဒေနှင့်အ coauthored - ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ဖလားအကြောင်းမှားနေဆယ်ပါးအကြောင်းရင်း: Rosling ဖေဖော်ဝါရီလ, 2017 ခုနှစ်ကွယ်လွန်သွားပေမယ့်သူကသစ်ကိုစာအုပ်တကယ်တော့နောက်ကွယ်မှအရွက် အန္န Rosling Rönnlund။ Gates ကယခုအချိန်အထိသူအစဉ်အဆက်ကိုဖတ်မယ့်စာအုပ် "ဟုအဆိုပါအရေးအပါဆုံးတဦး" ဟုခေါ်, ဤနှစ်တွင်သူ၏နှစ်ခုအကြိုက်ဆုံးတွေထဲကသိရသည်။ နှင့် Rosling - - ဒါကြောင့်အထူးတွင် TIME စာအုပ်စေသည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းပြောဆိုရန်ဘီလ်ဂိတ်နှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား။ TIME က: သင်ပညာရှင် Hans Rosling ရဲ့တကယ်တော့ကိုခေါ်တော့သူကဒါသိသာစေသည်ဘယျ "အစဉ်အမြဲငါကိုဖတ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခု။
တကယ်တော့လူတွေကအမှုအရာပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းရှိရာဒေသများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တိုးတက်မှုပြန့်နှံ့ကူညီရန်သူ၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်။ လူတွေတိုးတက်မှုရိပ်မိသည်ဤမျှခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါကိုဖတ်ပါတယ်အခြားနီးပါးဘာမှထက်ကရှင်းပြသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ဘက်လိုက်မှုကိုကျော်လွှားပြီးပို factfully ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လိုအဘို့ရှင်းလင်းစွာ, Actions အကြံဉာဏ်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစဉ်အမြဲငါကိုဖတ်ပါတယ်အရှိဆုံးပညာပေးစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါလူတိုင်းကိုပညာရှင် Hans
ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းအယူအဆတွေရှိမရှိအရေးပါသနည်း? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ပြီးသားလာပါတယ်မည်မျှသိလျှင်ဒါဟာတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျကမ်ဘာတိုးတက်လျက်ရှိသည်မယုံလျှင်, သင်တစ်ဦးအဖြစ်ဆိုးကိုကြည့်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိနေနှင့်ဘာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်တိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မည်မျှသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမကောင်းတဲ့အခွအေနကိုကြည့်ခြင်းနှင့်, ပြောနိုင်ပါတယ် "ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤပိုကောင်းစေနိုင်သနည်း" ပညာရှင် Hans ဒီကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုဖော်ပြရန်စုံလင်သောလမ်းဖြစ်သည့်တစ်ဦး "possibilist," မိမိကိုမိမိဖုန်းခေါ်ကြိုက်တယ်။ သူကသူတို့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ကြောင်း, အမှုအရာပိုကောင်းရနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြ၏။ ပညာရှင် Hans နှင့်တူတစ်ဦးက possibilist တိုးတက်မှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းပါဘူး - သူတိုးတက်မှုဖြစ်ပျက်နေသည်ရှိရာဒေသများအဘို့အကြည့်များနှင့်အခြားသောနေရာများ၌ပွားဖို့လမ်းကိုရှာ။
10 ၏ဘယ်သင်တို့သည်ငါတို့၏အနာဂတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အဘို့ကိုရည်မှတ်အများဆုံးရှာရမလဲ? အဆိုပါသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဟုတ်ပေမယ့်ငါအပြစ်တင်ဗီဇစိတ်ပူမိပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သောအခါ, တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဘို့အကြည့်ဖို့လူ့သဘောသဘာဝပါပဲ။ လူတိုင်းကိုဓားစာခံကိုအတူပြဿနာကိုသိတယ်။ သို့သော်သူရဲကောင်းများသို့လူတွေကိုလှည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇလည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူအမှုအရာကြောင့်အသူရဲကောင်းများ၏ပိုကောင်းမရကြဘူး။ အဲဒီမှာသူရဲကောင်းများ 1000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ရှိ. , ကမ္ဘာကြီးကိုရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်မီစနစ်များအံ့ဖွယ်ပါပဲ။ ယောန Salk တစ်ခုအံ့သြဖွယ်သိပ္ပံပညာရှင်ခဲ့ပေမယ့်သူကကျွန်တော်ပိုလီယိုချေမှုန်း၏အိမ်တံခါးပေါ်မှာဆိုရင်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး -
ဒါဟာလည်းကျန်းမာရေးလုပ်သား, NGO များနှင့်အစိုးရများအားဖြင့်ညှိနှိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သူရဲကောင်းများအစားစနစ်များကိုရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်ျာဘက်ဖြစ်ပျက်ရဲ့တိုးတက်မှုလက်လွတ်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုတိုးတက်စေလိုလျှင်ပိုကောင်းစနစ်များကိုတည်ဆောက်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေပါ။ ဤစာအုပ်ကိုတှငျအဘယျဆိုတဲ့အချက်ကိုအထူးသဖြင့်သင်ကအံ့အားသင့်? ပညာရှင် Hans ကမ္ဘာကြီးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုအဆိုပါမူဘောင်ငါ့အဘို့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလေးဝင်ငွေအဆင့်အတန်းအားဖြင့်လူတွေကို categorizes နှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းအပေါ်တည်ရှိသောဆင်တူရိုးမှားအလေးပေးဖော်ပြသည်။ သူတို့ $4တစ်ရက်မှ $2နေ့ကမှမိမိတို့ဝင်ငွေနှစ်ဆဥပမာ, လူတွေကသူတို့ကင်ရှာဆာသို့မဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်ဝေးလံသောရွာ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်စေ, ဖိနပ်များနှင့်စက်ဘီးကိုဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့နထေိုငျပုံကိုအားဖြင့်လူဦးရေ Organizing - မဟုတ်ဘဲသူတို့နေထိုင်ထက် - ကမ္ဘာ့အကြောင်းပြောဆိုရန်ပိုပြီးတိကျတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (ကျနော်တကယ်တော့ငါ့ Gates ကမှတ်စုများပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ဤအဆင့်ဆင့်၏ရှင်းလင်းချက်ပါဝင်သည်။ ) ဤစာအုပ်ထွက်လာကြနိုင်ခြင်းမပြုမီပညာရှင် Hans Rosling မနှစ်ကကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုနှင့်မည်သို့သူသည်သင်၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲ မိမိအထူးကဲကို TED ဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်: Melinda နဲ့ကျွန်မပညာရှင် Hans လူအများစုလုပ်ခဲ့တယ်တူညီသောလမ်းသူသင်ယူခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ညစာကျော်ရယ်မောကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တန်းတူအတိုင်းအတာ၌အကြှနျုပျတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပညာတရားကိုပူဇော်နိုင်သူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံပေးအဖြစ်သူ့ကိုမသိရသို့ရောက်ကြ၏။ အစဉ်မပြတ်ငါသူဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဟန်ချက်မျှအောင်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုလေးစားပါတယ်။ ပညာရှင် Hans သူ (စာသား) မိမိသတင်းစကားကိုစိတ်ဝင်စားသောလူစောင့်ရှောက်ဖို့တချို့ဓားကိုမျို, ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောဆိုရန်ကိုပွငျဆငျအခါတိုင်းစိတ်ထဲမှာအတွက်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သိတယ်။ ဤစာအုပ်အဘို့သင့်မျှော်လင့်ချက် Rosling ရဲ့အမွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကဘာလဲ? ပညာရှင် Hans အမြဲဒေတာကောင်လေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်သူကဤမျှလောက်ပိုပြီးထက်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့၏အဆုံးမှာပညာရှင် Hans သူသည်ကမ္ဘာ့အကြောင်းကိုသိတယ်အဘယ်အရာကိုအများစုတို့သည် လာ. ပြောပါတယ် "မဒေတာကိုလေ့လာရာမှ ... ဒါပေမယ့်အခြားလူများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း။ " သူကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုနှင့် beyo သှားသောဇာတ်လမ်းပြောပြများအတွက် knack ခဲ့
luusaannpaunggmyarrhcwar nhaitpaunggmyarrhcwar swedain sararwaan nhaint hcarrangyaangya panyarpanyarshin Hans Rosling rae TED ko swaynwaypwalabhhoet myarrtwin hpamyuu narrsain kya nhaint bedeyomyarr aanaeesone narmaikyee paan kardaarrone ko hpammi: Bill Gates k . bhelgate nhaint suueatjanee Melinda day tar kambharlonesinerar sainnrellmwaltaymhu nhaint kyannmarrayyaatwat pokaungg tae raladtway hphoet u saung lampya bhaallo kuunye payynine salellsotar paw htoe htwin simyin nae shurae kambharlonesinerar parisaatko rashihkae suua Rosling, mate hpwalhphoet swarrlayeat . nhaint aararko sain hcain hcarr par htakya sar. kawngya Areabhaal kyawwng, shu sarr, Ola Rosling nhaint samee-In- upaday nhainta coauthored - kyanawthoet kambharhpalarr aakyaungg mhar nay saalparr aakyaunggrainn: Rosling hpayhpawwarrel, 2017 hkunhait kwallwanswarr paymaae suu k sait ko hcaraote takaaltot noutkwalmha aarwat aann Rosling Rönnlund . Gates k yahkuaahkyaneaahti suuahcainasaat ko hpaat m y hcaraote " hu aasopar aarayyapar sone t u" hu hkaw, i nhaittwin suueat nhaithku aakyaitesone twayhtellk sirasai . nhaint Rosling - - dar kyount aahtuutwin TIME hcaraote hcaysai bhaalshoet saw aakyaungg pyawwso raan bhelgate nhaint aatuu hkyae saunghkyinnko hkanrasaw aarr . TIME k: sainpanyarshin Hans Rosling rae takaaltot ko hkaw tot suu k dar sisar hcaysai bhayya "ahcain aamyaell ngar ko hpaat partaal aarayykyeesone hcaraotetway htellk taithku . "? bhelgate: Hans kambhartwin htuuhkyarr pyaungmyawwat toetaatmhu aaung hkanhkaerasai hu yonekyi shin, suu k aakyaungg si raan luutine hkyintaal . takaaltot luutwaykamhuarar pokaungg lar pyehpyitkyaungg shirar daysamyarr hpawhtoteraan nhaint toetaatmhu pya ant nhaan kuunyeraan suueat noutsone kyaoepam aarrhtotemhu sai . luutway toetaatmhu riut mi sai imyaha hkaathkell m aeabhaal kyount darhar popyee shinnshinnlainnlainn ngar ko hpaat partaal aahkyarr neeparr bharmha htaat k shinnpyasai . suu k kyawantawthoetrae pain bhaat lite mhuko kyawlwhar pyeepo factfully kambharkyeeko kyi shu hphoet bhaalloabhhoet shinnlainnhcwar, Actions aakyaannyarn ko hawkyarrhkaepartaal . deahcain aamyaell ngar ko hpaat partaal aashisone panyarpayy hcaraotetway htellk taithku hpyitparsai, ngar luutine kopanyarshin Hans '' htoe htwin simyin rar mhaakyaoe pwu nongya htainpartaal . kambharkyeeko takaal luutway htain htaat pomo myansaan mhu nhuann mhar toetaat hcay shin,abhaal kyount luutwayaakyaungg ko mamhaankaankyaungg aayuuaasatway shimashi aarayypar sanaee? s ngya s nyyaakyahanyaupyathoet pyeesarr lar partaal maimyaha si shin darhar toetaatmhu aasheinaahone myaha int hphoet popyee lwalkuupartaal . s ngya s nyya kam bhar toetaat lyetshisai mayone shin, sain tait u aahpyitsoe ko kyi hphoet po hpwalshi nay nhaint bharmyaha m lotesaung ninetaal htainpartaal . shoetsaw toetaatmhu hpyitnine maimyaha sishi suu taithcone tait u ko tait u makaunggtaeahkw aay n ko kyi hkyinn nhaint, pyawwninepartaal " bhaallo kyahanyaupyathoet s nyya i pokaungg hcaynine sanaee" panyarshin Hans de kambhar aamyin aahkainnaakyinn ko hpawpyaraan hcone lain saw lam hpyit sany tait u "possibilist," mimi ko mimi hponehkaw kyaitetaal . suu k suuthoet pokaungg lain maal mahotekyaungg,amhuarar pokaungg r ninetaallhoet yonekyi kyaeat . panyarshin Hans nhaint tuu tait uk possibilist toetaatmhu myarraatwat hcaung sineparbhuu - suu toetaatmhu hpyitpyet naysai shirar daysamyarrabhhoetakyi myarr nhaint aahkyarrsaw nayrar myarr pwarr hphoet lam ko shar . aasoemyin hcatetway seshoet tait bej nae tuu, darmhamahote kyawwatrwan saw sabhaw sai myetnhar shoet t utaee - Rosling taitsaal kambharkyeeko pawmhar ngarthoet shu htaw int hpyet saihu bej aatine aasayyhcate hpawpyahtarrsai . 10 eat bhaal sainthoetsai ngarthoet eataanargaat nhaintabhaal kyountabhhoet ko rai mhaat aamyarrsone shar ramalell? aasopar sisar aakyaunggpyahkyet myarraatwat mahote paymaae ngar aapyittain bej hcatepuu mipartaal . taithkuhku hpyitpyet sawaahkar, tarwaanshi puggolabhhoetakyany hphoet lhu sabhawsabharw parpell . luutine ko dharrhcarhkan ko aatuu pyaဿnar ko sitaal . shoetsaw suurellkaunggmyarr shoet luutwayko lha eet hphoet kyawantawthoetrae bej laee toetaatmhu taithku aatarraasee hpyithcay nineparsai . aanaeengaal hkyawinhkyet nhaint aatuuamhuarar kyawwngasuurellkaungg myarreat pokaungg m r kya bhuu . aelldemharsuurellkaunggmyarr 1000 lwanhkaetaenhaitpaungg shi. , kambharkyeeko rwarr lha hpyithkaesai . hkayatme hcanaitmyarr aanhpwal parpell . yawn Salk taithku aan sya hpwal sippanpanyarshin hkae paymaae suu k kyawantaw pole yo hkyaaymhuann eat aain tanhkarr pawmhar sorain taithkutaeesaw aakyaunggpyahkyetmahoteparbhuu - darharlaee kyannmarrayy lotesarr, NGO myarr nhaint aahcoer myarraarr hpyint nyhainhaine karkwalsayy htoe kyaoehcarr aarrhtotemhu ko kyaayyjuutainpartaal . kyanawthoet suurellkaunggmyarr aahcarr hcanaitmyarr ko shar taeaahkar mhar kyawantawthoet ko myarreat shae mhaout laat yaar bhaat hpyitpyet rae toetaatmhu laatlwat . s ngya s nyyaarar taithkuhku toetaat hcay lo shin pokaungg hcanaitmyarr ko taisout m ae naeelamtway sharhpway par . i hcaraoteko thangyaabh yya sotae aahkyetko aahtuu s hpyint sain k aanaarr saint? panyarshin Hans kambharkyeeko hpawpyaraan aasonepyu aasopar muu bhaung ngarabhhoet byaardate taw hpyithkaesai . suu layy wainngway aasaint aataann aarr hpyintluutwayko categorizes nhaint tait u hkyinn hce t u taee aapaw taishisaw saintuu roemhar aalayypayy hpawpyasai . suuthoet $4taitraatmha $2nae k mha mimithoet wainngway nhaits upamar, luutwayk suuthoet kain shar sar shoetmahote bhain g larr dae aatwat wayy lan saw rwar eat sainhkyayhpone twin aasaatshin nayhtine hpyithcay, hpinaut myarr nhaint hcaatbhee ko waal lae shipartaal . suuthoet n htayo ngya pone ko aarr hpyint luu uray Organizing - mahotebhell suuthoet nayhtinehtaat - kambhar aakyaungg pyawwso raan popyee tikyatae naeelam hpyitpartaal . ( kyanaw takaaltotngar Gates k mhaathcumyarr pyanlaisonesaut twin i aasaint saint eat shinnlainnhkyet parwainsai . ) i hcaraotehtwat lar kya ninehkyinn mapyu mepanyarshin Hans Rosling manhaitk kwallwanhkaesai . shuko nhang maishoet suu sai saineat kambhar aamyin aahkainnaakyinn ko sya jar lwhammoe hkae kya nhang saineat saatsanrayy k bhaallo shihkaesalell mimi aahtuu kellko TED swaynwaypwalmyarr mhat saint: Melinda nae kyawanmapanyarshin Hans luuaamyarrhcu lotehkaetaal tuunyesaw lam suu sainyuu hkaetaal . kyanawthoet noutsonemhar matesway tait u nhaint nyahcar kyaw raalmaw kyawantawthoet ko hcaung shout hkyinn nhaint taanntuu aatineaatarakyahanyaupya thoeteat aahkyayhkan aotemyit rae maharbyauuhar nhaint paatsaatpyee panyar tararr ko puujaw nine suu tait u yonekyi hcatehkya rasaw aakyaanpayy aahpyit shuko m sir shoet rout kyaeat .ahcain mapyat ngar suu hpyawhpyayrayy nhaint aatuu pahchcaee uhchcar myarrko haanhkyet myaha aaung hceman hkaant hkwal pone ko layyhcarrpartaal . panyarshin Hans suu ( hcarsarr) mimi satainnhcakarr ko hcatewainhcarr saw luu hcawng shout hphoet tahkyahoet dharr ko myao, ngar kyawantawthoetrae aahkyayhkan aotemyit rae aalote aakyaungg pyawwso raan ko pwngya sangya aahkartine hcatehtellmhar aatwat hcaung shout raan kyaoehcarrhkae sitaal . i hcaraoteabhhoet sang myahaaw lainthkyet Rosling raeamway eat aahcateaapine taithkuaahpyit k bharlell? panyarshin Hans aamyaell day tar kaunglayy hpyithkyinn kyount luusimyarr paymaae suu k imyaha lout popyee htaat hkaepartaal . takaaltot eata sone mharpanyarshin Hans suu sai kambhar aakyaunggko sitaalabhaalaarar ko aamyarrhcuthoetsai lar. pyawwpartaal " m day tar ko laelar rarmha ... darpaymaae aahkyarr luumyarr nhaint aatuu aahkyane hpyuann . " suu k luusarrmyoenwalaapaw tait u m yonekyi nine loutaaung naat shine saw narrlaimhunhaint beyo shar saw jaratlam pyawwpyamyarraatwat knack hkae
artzone wafrica esteem good-karma hr1